Adeegyo Internet oo lagu kashifayo dadka horay dembiyo loogu xukumay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jessica Gow/TT.
Adeegyo Internet oo lagu kashifayo dadka horay dembiyo loogu xukumay
La daabacay måndag 27 januari 2014 kl 09.58
Ma jiraa qof aad deris tihiin oo horay kufsi loogu xukumay? Immisa qof oo horay loo xukumay ayaa ku nool xaafadda aad deggan tahay? Waxaa hadda bilowdey adeeg internet ah oo muran ka dhashay, laguna ogaan karo shakhsiyaadka horay loo xukumay iyo xukumadii lagu riday.
Magaca iyo lambarka aqoonsiga qofka ka sokow waxaa halkaas laga arki karaa khariidada waddada ama xaafadda qofkaasi deggan yahay. Xukumada qofka lagu rideyna waxay ku calaamadeysan yihiin qalin cas. Xukumadaasna waxaa lagu soo dejisan karaa khidmad laga bixiyo.
– Waxaan aamminsanahay in ay tahay fekrad ganacsi oo dhimasho ku xukuman. Waxayna u muuqataa mid ka soo horjeedda xeerka macluumaadka shakhsiga, waana la joojin doonaa. Sidaasna waxaa yiri Mårten Schultz oo ah caalin ku takhasusay cilmiga xeerarka lagu dhaqo dadka rayidka ah.
Balse Pontus Ljunggren oo ah garyaqaan afhayeen u ah shirkadda adeeggaas oo lagu magacaabo Lexbase ayaa qaba in adeeggaan internet uu yahay mid waafaqsan bulshada aan dooneynno in ay Iswiidhen ku noolaato.
– Fekerka ugu muhiimsan qaynuunka kor ka ilaalinta laamaha bulshada ayaa ah in macluumaadka bulshada loo soo bandhigo ay tahay wax wanaagsan. Wax kale ma aannaan sameyn ee nidaamkaas ayaan casriyeynney oo qura.